Vakambobuda muMDC-T Vachienda kuZimPF neNPP kuMashonaland West Vanodzokera Kumatongo
Dzimwe nhengo dzemapato eNational People’s Party (NPP) neZimbabwe People First (ZimPF) dzinodarika zana dzainge dzambobva kubato reMDC-T inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai dzakadzokera kubato iri dzichiti ndiko chete kunejekerere.
Nhengo idzi dzakaungana kumahofisi ebato reMDC-T muChinhoyi neMugovera dzichizivisa nezvedanho ravainge vatora rekudzokera kumusha.
Mumwe wevakadzokera kubato reMDC-T ndiVaJaspa Mavhunga vekwaZvimba avo vainge vave nhengo yebazi repamusoro mubato reZimPF. Vanoti vakafunga zvekudzokera kubato reMDC-T nekuti kuZimPF hakuna hutongi hwejekerere.
Izvi zvinotsigirwa naVaTendai Musonza avo vainge vavekubato reNPP vanoti vainge vabuda mubato reMDC-T vachifunga kuti paneshanduko ingaunzwe nemamwe mapato nekukurumidza asi vanoti hapana zviri kuitwa sezvo kuri kutungana kwembudzi.
VaMusonza vanoti vainge vabuda mubato reMDC-T nekuda kwekudziviswa kutora zvigaro zvavanoda mubato iri asi vanoti danho iri rakagadziriswa naVaTsvangirai pamisangano yavakaita yekusangana nenhengo dzavo mwedzi mishoma yapfuura.
Mutauriri weMDC-T mudunhu reMashonaland West VaBlessing Mandava vanoti bato ravo riri kukura uye zvicharerutsa basa riripo rekutsvaka rutsigiro musarudzo dzegore rinouya.
Mutauriri webato iri mudunhu reMashonaland West VaWilson Makanyaire vanoti vanogamuchira vanoti vanogamuchira vanhu ava nemaoko maviri.
Asi mutauriri weNPP VaGift Nyandoro vanoti aya manomano ari kuitwa nemasangano ari kutya mutungamiri wavo Amai Joyce Mujuru musarudzo dzegore rinouya. VaNyandoro vanoti zviri kuitwa izvi munongedzo wekuti MDC-T yadzidza zvakaipa kubva kuZanu-PF panyaya yekunyepera vanhu.
Asi mutauriri weMDC-T VaObert Gutu vanoti zviri pachena kuti musasa mukuru uri kunaVaTsvangirai nokudaro hazvishamise kuti vanhu vave kukoromoka vachiuya sezvo sarudzo dzaswedera. VaGutu vanoti munhu wese anoda kukwira chitima chinotyairwa naVaTsvangirai.
Hatina kunzwa divi reZimPF panyaya iyi sezvo nhare mbozha yamutauriri webato iri VaRugare Gumbo yanga isingadavirwi.